Budleya - एक सुन्दर shrub, अप गर्न 2.5 मीटर उच्च, अक्सर भनिन्छ जो "शरद ऋतु को lilacs।" र कुनै आश्चर्य। लेट गर्मी मा चीन, budleya blooms हामीलाई ल्याइएको र यसको फूल अक्टोबर को सम्म जारी छ। बुश inflorescences यहाँ बाट, बकाइन धेरै समान छन् र नाम "" गिर पठाउनुहोस्।
Budleya: रोपण र हेरविचार, विशेष बढ्दै
बुश घर आर्द्र Subtropical जंगल, र यसैले सबैभन्दा सहज त्यस्तो अवस्थामा महसुस छन्। तपाईं यो सौन्दर्य रोपेर निर्णय भने, स्थान सर्वश्रेष्ठ चयन गर्न एक, घाम खुला र प्राथमिकताको उत्तरी हावा बाट सुरक्षा संग। बुश राम्रो पानी soils अनदेखी, भारी loam, सबै भन्दा छाडा मा सहज सहनुहुन्न।
अनुभवी माली बुश ड्राई पीट आसपास जमीन आयातित गर्न सुझाव दिन्छौं। तातो मौसम मा बोट आवश्यक प्रशस्त मात्रामा पानी हाले गर्नुपर्छ। साँझ, यो पानी पात स्प्रे गर्न किनभने आर्द्र हावा budleya रुचि मनमोहक छ।
बिरुवाहरु को रोपण र हेरविचार कटु जाडो frosts देखि एक विश्वसनीय सुरक्षा प्रदान गर्नु पर्छ। प्रतिकूल तापमान गर्न एक्सपोजर ब्रश नष्ट हुन सक्छ।
Thermophilic budleya: कसरी जाडो मा बोट जोगाउन, यो हेरचाह गर्न?
हाम्रो जलवायु क्षेत्र भन्दा साधारण छ budleya दाऊदले। सीतनिद्रा अघि आधार मा कटौती गरिएको छ। ध्यान दिएर पराल, पात फोहर फाल्न वा पीट sheltering जरा, खाद हालन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
Budli सामान्यतया पूर्ण बन्द काट्न ocherednolistny। पुरानो वा सुकेको मार मात्र हटाउँदछ।
आश्रय लागि झाडी स्प्रूस शाखा प्रयोग। हिउँ जाडोयाम मा budleya मर्न सक्छ। को shrub बस विनाशकारी उहाँलाई लागि धेरै गर्मी-मायालु र चरम चिसो छ, किनभने सुरक्षा र हिउँदमा यो संरक्षण मा निहित यो बोट को खेती मा मुख्य कठिनाई छ।
Budleya: रोपण र हेरविचार, विशेष गरी प्रजनन
Shrub एकदम बस cuttings प्रयोग भंग। को मार को भन्दा माथि जुन, 15 सेन्टीमिटरको लम्बाइ को अन्त मा कटौती छन्।, तल्लो पात हटाइएका छन्। केही समयको लागि राखिएको छ pacemaker मूल गठन, र त्यसपछि5सेन्टीमिटरको गहिराइमा गर्न जमीन मा फँस। Seedlings प्रशस्त मात्रामा पानी हाले र कुन pristanut र नयाँ मार फलिफाप भएको cuttings पछि हटाइएको छ एक फिलिम, एक हुड ढाकिएको।
Budleya गुणन गर्न सक्छन् र बीउ, तर यो विधि मात्र दक्षिणी क्षेत्रहरु मा उपलब्ध छ। हाम्रो जलवायु क्षेत्रमा बीउ पकाना।
Budleya, रोपण र हेरविचार पछि ठीक बाहिर छन्, प्रशस्त फूल प्रसन्न। बुश छैन धेरै हरेक वर्ष यसको बाली उत्पादन भयो। को hedges मा धेरै राम्रो देखिन्छ, यो यस्तो spirea रूपमा समूह plantings बिरुवाहरु मा संयुक्त गर्न सकिन्छ। तर पनि अलग लगाए, यो आफ्नो बगैचा सजाउनु हुनेछ - त्यो budleya छ!
को ब्रश लागि रोपण र हेरविचार (फोटो देखाइएको छ) तपाईं सबैभन्दा खुशी दिनेछु। म यसलाई शरद ऋतु को एक पृष्ठभूमि मा रंग सानो फूल झाडी को एक दङ्गा हेर्न राम्रो छ भनेर गर्मी को अन्तिम दिन अन्तिम गर्मी दिन आफ्नो बगैचा मा रहन निर्णय हुनत रूपमा, पहेंलो छोड्दा सहमत ...
बिहान महिमा। रोपण र हेरविचार
किरा बगैचा: विवरण र तिनीहरूलाई लड्न सुझावहरू
मिनी सुनगाभाहरू: घर मा हेरविचार। बौना सुनगाभा
कसरी समुद्र आकर्षित गर्न? सुझाव जवान seascape
ओलिभिया MUNN: टिभी प्रस्तोता, अभिनेत्री, मोडेल
सम्पर्क लेंस डेली: समीक्षाहरू